EUPHORBIA: GURYAHA MUHIIMKA AH, ISTICMAALKA IYO WAXYEELLADA - EUPHORBIA
Euphorbia waa warshad dilka ah oo soo koraysa ku dhowaad dhammaan qaaradaha. Waxaa jira in ka badan kun nooc oo dhirtaas ah. Magaca "warshad" ayaa la helaa sababtoo ah afkoda iyo caleemaha geedka waxaa lagu buuxiyey casiir cad oo qaro weyn leh, oo u eg caano.
Qodobada waxtar leh ee caanaha laga helo caanaha
Malabka Milkweed wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah iyo ari aan caadi ahayn. Iyadoo ay sabab u tahay daaweynta iodine, waa tartiib iyo qadhaadh. Si kastaba ha noqotee, malab ka soo jeeda caanaha xoolaha ayaa sii haya guryaha bogsashada muddo dheer. Dhibaatadani waxay dhadhaneysaa suufku wuxuu leeyahay sifooyin gaar ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada sida sclerosis, laabotooyinka, dhiig-yaraan, guma-jarid. Waxay ka caawisaa in la nadiifiyo xididdada dhiigga, waxay ka hortagtaa koritaanka cudurada wadnaha. Guryaheeda faa'iido leh waxay ka caawisaa cudurrada beerka, caloosha, cudurrada caloosha.
Iodine oo ka kooban halbeegga caanuhu wuxuu hagaajiyaa xasuusta, waxay hagaajinaysaa murqaha muruqyada waxayna xoojisaa nidaamka dareenka. Birta ku jirta waxaa ka mid ah wax soo saarka unugyada dhiig-karka, kaas oo ah mid aan lagama maarmaan u ah dhiig-yaraan iyo dhiig-yaraan. Qaar badan oo vitamiin iyo macdan ah ayaa ku jira halabuurka, iyo sidoo kale walxaha bayolojiga firfircoon, waxay u oggolaanaysaa in lagu beddelo qaybta fiitamiinada iyo macdanta inta lagu jiro yaraanta fitamiin la'aanta, inay dib u dhisto yaraanta jidhkooda.
Xiiso leh Haddii aad ka cabto hurdo la'aan iyo daal joogta ah, waxaad dareentay dareemayaashaada, inaad cabto shaaha diirran adoo qaadka caanaha ka soo iibsada caanaha.
Qodobbada waxtarka leh ee cabitaanka caanaha
Euphorbia juice sun ah ayaa si firfircoon loogu isticmaalaa guriga iyo dawada dhaqameed. Casiirka Milkweed waa diaphoretic, diuretic, durbadiiba iyo anti-bararka. Casiirka waxaa ku jira alkaloids, xanjo, saponins, fareeshka iyo fareemka. Enzymes waxaa laga helaa caawimaad cirridi ah oo la yiraahdo leukemia, oo taageera nidaamka difaaca. Euphorbia wuxuu leeyahay aphrodisiac, antiseptic iyo bakteeriyada bakteeriyada. Waqtiyadii hore, casiirka caanaha waxaa lagu daaweeyay qaniinyada cayayaanka, xayawaanka, boogaha.
Warshadu waxay leedahay saameyn liddi ku ah kansarka, daawooyinka ku salaysan kaalmada caanaha xitaa iyada oo leh burooyin ballaaran. Caanaha dhirta ayaa joojiya koritaanka metastasis. Marka marinnada dhiigga, lactones ay ku jiraan juice ee caano wata waxaa la qaadaa dhiig ilaa meel kasta oo ah degsiimooyin burooyinka oo aan jirin wax xayiraad ah.
Ma taqaanaa? Masar hore, euphorbia waxaa lagu daaweeyay cambaarta, fungi, burooyinka. Iyadoo caawimaad casiir ah ay joojiyeen dhiigbaxa iyo madax-xannibay madax-xanuun.
Marka la isticmaalo cabitaanka casiirka yar yar, waxay leedahay saameyn dib-u-dhalasho. Casiirka caanaha waxaa lagu daaweeyaa shuban iyo xannuunno, oo loo isticmaalo sidii loo yaqaan "emetic, caloosha iyo cudurrada wadnaha". Casiirka casiirka wuxuu kudhufaa burooyinka, lichen iyo maqaarka ay saameeyeen cudurka isnadaamiska.
Isticmaalka afkoda iyo caleemaha caanaha ee daawada
Shaaha ka soo baxa caleemaha caanaha ayaa loo qoondeeyey kansarka caloosha. Fusamida feejignaanta daciifka ah ayaa loo diyaariyaa daaweynta catarrh ee caloosha, kelyaha, cystitiska, xanuunka, dhiig-baxa.
Maraqadu waxay cabbaan madax-xanuun, xiiq-dheer, cudurada sanbabada. Shaaha laga sameeyey afkoda iyo caleemaha ayaa leh saameyn jilicsan.
Waa muhiim! Xusuusnow, diyaarinta daawooyinka waxaad u baahan tahay inaad ogaatid qiyaasta saxda ah. Euphorbia waa sun ah xoog leh, oo aan dawo ahayn, haddii aad ka badato caadada, taas oo aan khatar u ahayn caafimaadka. Markaad isticmaasho daaweynta miyir-biyoodka, la tasho dhakhtarkaaga.
Maraqyada iyo kiriimyada ka soo baxa caleemaha iyo afkoda ayaa ka soo bixiyay dhibco udheer iyo burooyin, galley. Saldhigyada wanaagsan ee gooyooyinka caleemaha loogu talagalay turxaan. Fudud ayaa daaweyn kara cudurada lafaha iyo fungal ee cagaha. Xusuusashada khatarta caanaha, caanaha iyo gogol-tirka ee carruurta lagu maydho cudurrada maqaarka waxaa loo isticmaalaa taxadar.
Euphorbia waxaa loo isticmaalaa daawaynta hormoonnada hormoonnada haweenka. Iyada oo qayb ka mid ah warshad waxaa jira xeryoodyo gaar ah - phyto-androgens, oo leh saameyn sax ah markii ay dhacdo khalkhalka hormoonnada, si weyn u yareeya koritaanka hormoonnada iyo nidaaminta asalka guud. Qodobada Androgenic ee caanaha laga iibsado waxaa loo isticmaalaa fibromas iyo myomas ee haweenka.
Isticmaalka dhirta iyo xididdada caanaha ee daawada
Guud ahaan, xididka caanaha euphorbia waxaa lagu magacaabaa "rooti caan ah" ma aha oo kaliya sababtoo ah qaabkeeda. Dawooyinka loo diyaariyay xididka, oo loo isticmaalo daaweynta caqabada iyo cillad la'aanta erectile. Faa'iidooyinka caanwaanka ayaa muujiyey daaweynta dhammaan xubnaha jirka miskaha yar ee ragga.
Tincture wuxuu ka caawiyaa boogaha iyo geeddi-socodka bararka sambabada, waxay gacan ka geystaan ​​xoojinta nidaamka difaaca, la dagaallanka caabuqyada. Tincture ee xididka ka caawisaa cudurrada maqaarka. Tannins, glycosides iyo saponins, kuwaas oo qayb ka ah xididka, daweeyo cudurada gastric.
Geedka dhirta ayaa yaraynaya calaamadaha shubanka iyo cystitiska. Dadku inta badan waxay u isticmaalaan sida calool jilciye iyo durayo, iyaga oo isticmaalaya si ay uga takhalusaan Gooryaanka. Markii hore, isbaarooyinka ayaa loo arkaa caws cirro leh, waxay ka caawisay in laga takhaluso waxyeellada iyo xoogagga mugdiga ah.
Daawada casriga ah, wax soo saarka asaasiga ah waxaa loo adeegsadaa sunta halista ah ee loo yaqaan 'emetic', oo qaniinyada xayawaanka ku dhaco. Dhirta faleebadu waxay yareeyaan calaamadaha xanuunka ee cudurka kalyaha, neefsashada, jidhka gudaha ee jidhka. Decoction ee cawska waxay ka caawisaa xanuunka caloosha, madax xanuun, xiiqdheer. Caleemaha dhoobada waxay cuncunayaan cuncunka iyo barar ku dhaca cambaarta, maqaarka, boogaha iyo cudurada kale ee maqaarka. Nadiifinta nadaafadda jirka waxay carruurta ka dhigtaa cudurka urtikaria ama khafiifinta.
Isticmaalka subagga laga bilaabo abuurka caanaha ee daawada
Dad badan, haddii aaney dhammaan, waxay maqleen saliida castor: badeecadan waxaa laga helaa digirta castor, sidoo kale laga bilaabo Euphorbia. Daawada dheer ee la ilaaway waxaa loo isticmaalay daaweynta hargabka iyo cudurrada viral, xiiqdheer, gubasho, iyo tuubooyinka caawinaada ayaa laga saaray.
Saliida dufanka waxay ka caawisaa jarista, gubashada iyo boogaha. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xoojiyo ciddiyaha, timaha, dhego-xiirta gogol-xajinta. Saliidku wuxuu jilciyaa maqaarka wuxuuna ku siman yahay laalaabkii, sidaas darteed quruxda casriga ah waa in ay si dhow u eegto sheygan.
Saliida Milkweed ayaa lagu dari karaa neefsashada daaweynta boronkiitada, tracheitis iyo cudurrada kale ee neefta. Saliida qudaarta ee loo yaqaan 'Cypress euphoric oil' ayaa loo adeegsadaa soo saarka daawooyinka kala duwan, cudurada beerka, cudur kalyaha, mareenka caloosha, neefta neefta, oof-wareenka.
Saliidda Milkweed waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro daawooyinka qaabka kiniiniga iyo daboolista daaweynta dhibaatooyinka haweenka: cysts, myomas, fibroids, infertility. Dhakhaatiirta Mongoliya xitaa waxay daweeyaan cudurada galmada ee saliidda. Maalmadii hore iyo hadda saliid waxaa loo isticmaalaa calool jilciye. Markii hore, miraha geedka waxaa lagu qasi jiray basbaaska kulul la shiiday iyo daacuunka ayaa lagu daaweeyay isku dar ah.
Marka lagu daro maqaayada, marka lagu daro maqaarka wajiga, jidhka, gacmaha iyo madaxa, saliidda waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo saabuun tayo sarre leh, ma aha oo kaliya guriga, laakiin sidoo kale qiyaasta wax soo saarka.
Waa maxay walbahaarka halista ah
In juice ee geedka waxaa jira walxo iyo enzymes kuwaas oo leh saameyn sun ah on jirka aadanaha. Marka la waydiiyo in ay suurtogal tahay in guriga lagu hayo gureyga, jawaabta dhabta ah maaha haddii ay jiraan carruur ama xayawaan guri. Casiirka Milkweed wuxuu keenaa dareen-celin xasaasiyadeed, casiirka gubta muddo yar oo waqti dheer ah, sababtoo ah casiirku wuxuu cunaa unugyada, isaga oo u rogaya boogo. Uma baahnid inaad si gaar ah u jebiso laanta ama xaashida. Waxay ku filan tahay in la jeexjeexo, sida casiirku si dhakhso ah u xoqo gacanta ama sanka, indhaha ilmo ama xayawaan.
Digniin! Indhaha waa in markiiba la dhaqaa biyo badan oo nadiif ah. Casiirku wuxuu keeni karaa indho-la'aan ah illaa illaa xubinta maqaarka xuubka ah ee uu cuno ee la cuno dib loo soo celiyo.
Haddii dheecaanku ku dhaco dheecaanka afka, sanka, ama dibnaha, isla markiiba biyo raaci. Haddii casiirka la liqo, ugu yaraan rajeynayo waa calool xanuun. Halbeegga casiirku wuxuu ka kooban yahay alkaloids, sunta sunta ah iyo xeryaha sunta ah, oo, marka loo isticmaalo si habboon iyo qiyaasta, daawo, iyo haddii aan la xakameynin, sidoo kale, si khalad ah ayaa loo soocaa qaab isku dhafan, sun ah. Marka lagu daro cudurada dheefshiidka, casiirku waxay sababi kartaa sababo aan caadi ahayn, ma ahan wax khasaare ah oo waqtiyadii hore loo yaqaan 'caanaha jinniga'.
Spurge - warshad qurxoon oo qurux badan, bannaanka u badan ma diidi doonaan in ay soo buuxiyaan ururinta leh ubax aan caadi ahayn. Macluumaad ku saabsan waxa neefsashada waxyeellada leh, waxay kaa caawineysaa inaad si habboon u daryeesho, isaga oo qaadaya taxadar kasta.